भिडियो Archives » Page3of 86 » Etajakhabar
आइतबार, मंसिर ०३, २०७४	| Sunday, Nov 19, 2017
ऋचाले खोलिन् आफ्नै श्रीमानको पोल, अन्तर्वार्तामै गरिन यस्तो मस्ती (भिडियो)
बुधबार, कार्तिक २२, २०७४
ताजा खबर :- नायिका ऋचासिंह ठकुरी निर्मात्री बनिसकेकी छिन् । ऋचा मङ्सिर २९ गते बाट प्रदर्शनमा आउने भनिएको फिल्म 'सुपर गोर्खे'बाट निर्मात्री बनेकी हुन् । ‘नाइँ नभन्नु ल’ डेब्यू गर्ल ऋचासिंह ठकुरी यस फिल्ममा पनि मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छिन् । राज थापाको निर्देशनमा बनेको फिल्म ऋचाकै प्रोडक्सन कम्पनि 'अबिर हाउस प्रोडक्सन'को ब्यानरमा तयार भएको हो । टिजर समेत सार्वजनिक भइसकेको फिल्म 'सुपर गोर्खे...
रामकृष्ण ढकालको गीतमा रिमा विश्वकर्माको दमदार अभिनय, हेर्नुहोस् यो जीवन्त गीत
काठमाडौँ । श्रीमान् श्रीमतीले एक अर्काको माया र कामको मर्मलाई नबुझे जीवनले गति लिन सक्दैन । प्रेमी प्रेमीकाले एक अर्कामा प्रेमको भाषा नबुझ्दा भोग्नु परेको कठीनाईलाई देखाउन खोजेको गीतकार इश्वर श्रेष्ठको गीतमा गायक रामकृष्ण ढकाल गज्जबसँग बगेका छन् । जसमा दीपक शर्माको संगीत तथा नरेन्द्र बियोगीको एरेन्ज रहेको छ । पछिल्लो समयकी चर्चित मोडल रिमा विश्वकर्मा र विकाश लामीछानेले जीवन्त शैलीमा अभिन...
गरिब र रोगी भएकै कारण गाउँ निकाला हुनुपर्यो यी महिला; ‘दुई जिउमा बुढाले कुट्थ्यो, गाउँलेले थुक्थे’ ( भिडियो)
गरिब र रोगी भएकै कारण एक महिलाले आफ्नै गाउँबाट बिस्थापित हुनु परेको छ । सिन्धुली जिल्लाको पिपलमाडी स्थाई घर भएकी अन्जना राईलाई छारे रोग लागेको कारण नै गाउँसमाज र आफन्तले तिरस्कार गरेर गाउँनिकाला गरेको हो। २१ औ शताब्दीको हाम्रो समाजमा पनि यस्तो घटना भयो भनेर सायदै कमले मात्र बिश्वाश गर्लान तर यो वास्तविकता हो । वास्तविकतासँगै यस घटनाले २१ औ शताब्दीको हाम्रो समाज कुन स्तरको रहेछ छर्लङ्ग पारेको छ। ...
नेपालकी पहिलो पोर्नस्टार- पोखराकी विन्दु परियार कसरी बनेकी थिईन पोर्नस्टार हेरौँ (भिडियो)
श्वेता खड्का र दयाहाङको ‘कान्छी’ को ‘चरी चट्ट’ट्रेन्डिङ नम्वर एकमा, ३ दिनमा १० लाखले हेरे भिडियो
मंगलबार, कार्तिक २१, २०७४
काठमाडौँ । अभिनेत्री श्वेता खड्का र अभिनेता दयाहाङ राईको दमदार अभिनय रहेको फिल्मको ‘कान्छी’ को ‘चरी चट्ट’बोलको गीत ट्रेन्डिङ नम्वर एकमा पर्न सफल भएको छ । युट्युबमा रिलिज भएको ३ दिनमै यो गीत नम्वर एकमा पर्न सफल भएको हो । यो गीतलाई करिब १० ले हेरेका छन् । गीतमा राजनराज शिवाकोटीको शब्द तथा स्वर रहेको छ । स्वरमा उनलाई अञ्जु पन्तले साथ दिएकी छिन् । बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोमा अभिनेत...
र्यापर तथा गायक मन श्रेष्ठको गीत गोल्ड स्टार जुत्ताको भिडियो सार्वजनिक
सोमबार, कार्तिक २०, २०७४
काठमाडौँ । र्यापर तथा गायक मन श्रेष्ठको गीत गोल्ड स्टार जुत्ताको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । स्वदेशमा नै बनेको गोल्ड स्टार जुत्ताको खुलेर बयान गरिएको गोल्ड स्टार जुत्ता बोलको गीत सार्वजनिक भएसँगै राम्रो चर्चा पाइरहेको छ । नेपालमा बनेको जुत्ताका विषयमा केही नराम्रो नभन्ने र सबैले यसको प्रयोग गरेर प्रचार गर्न समेत गीतमा आग्रह गरिएको छ । १२ रुपेयाँमा दुई जोड आउने जुत्ता एउटा घरकी बुढी र अर्को गलफेण्...
भारतमा ज्यान गएको छोराको सम्झना स्वरुप मनै रुवाउने गीत गाईन् यी बुढि आमाले (भिडियो सहित)
ताजा खबर:- स्याङ्जा: स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका ५ स्वरेक मैदानमा बिहीबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता संचालन भै रहेकोछ। सन् २०१८ मा इन्डोनेसियामा हुने एसियाली हवाई खेलकुदको खेलाडी छनोट गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको बाबु एडभेन्चर क्लबका निर्देशक सानोबाबु सुनुवारले जानकारी दिए। यसै बीच प्यारग्लाइडिङ्गको साथमा विभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको छ। उक्त सास्क...
कोरियामा मानसिक सन्तुलन गुमाएका एक नेपालीको दर्दनाक अवस्था
नेपालबाट इपीएस मार्फत बर्सेनि नेपाली युवाहरु दक्षिण कोरिया रोजगारका लागि जाने गर्दछन। दक्षिण कोरियामा रोजगारका लागि अथवा आफ्नो भबिस्य सुन्दर पार्नका लागि पैसा कमाउन गएका एक युवा मानसिक सन्तुलन गुमाएर बेहोस अवस्थामा पुगेका छन । उनका परिवार नेपालमा पर्खीरहेका छन् उनि आफ्नो छोरीलाई भेट्न मन लागेको बन्दै छन उनलाई नेपाल पठाउन त्यहाका अन्य नेपालीहरुले पहल गरेर नेपाल पठाउदै छन ।धनुजा बान्तवा राई नाम ग...
नेपाल फर्किएपछि र्यापर साकार यस्तो अवस्थामा ! आमा भन्छिन, ‘साकार अब बिग्रियो भने उसलाई नै त्यागीदिन्छु’ (भिडियो)
आइतबार, कार्तिक १९, २०७४
ताजा खबर:- अष्ट्रेलियामा छदा सामाजीक संजाल फेसबुक मार्फत लाइभ भिडियो बनाएर अश्लिल शब्द प्रयोग गरि एकाएक विवादमा तानिएका थिए। मानसिक रुपमा कमजोत भइ कुलतमा फसेको कारण साकारले लगातार फेसबुक लाइभ मार्फत अश्लिल शब्द प्रयोग गरि आफन्तजन देखि सरकार सम्मलाई गालि गलौज गरेका थिए । उनको उपचारको लागि अनेक प्रयास भएतापनि असम्भब भएपछि परिवारले उनलाई नेपाल ल्याएको छ। साकारकि आमा रोजु अधिकारि आफै अष्ट्रेलिया गए...
सागर आलेले गाउँदा दमौलीमा धुलो उडाए (भिडियो सहित)
ताजा खबर :- सागर आलेले गाउँदा दमौलीमा धुलो उडाए हेर्नुहोस भिडियो सहित
बेहुला बेहुली चढ्ने गाडी झै फूलै फूलले सजाइएको कार पल्टियो, कारको ढोका खोलेर हेर्दा प्रहरी नै छक्क
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई खुशीको खबर, यसरी फेरीँदैछ सडक
दिदीका लागि स्कुटी किन्न पुगे यी भाई ,झोला खोलेर हेर्दा शोरुमका स्टाफ बने अचम्मित
केवल यी २ चीजलाई उमाल्नुहोस् र तुरुन्त मोटोपनको समस्याबाट छुटकारा मिल्नेछ, यस्तो छ कारण
भैरहवाबाट यात्रु लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना
पूर्व राजकुमार दीपेन्द्र शाह तिहारमा गीत गाउदै भैली खेलेको दुर्लभ भिडियो
छोरा प्रकाशको मृत्युको खबर झापामा नै पाएपछि यसरी काठमाडौँ आएका थिए प्रचण्ड, साथमा नै थिए छोरी ज्वाई
‘प्रचण्ड’का पुत्र प्रकाश दाहालको निधनप्रति यसरी दुःख व्यक्त गरे कमल थापाले
मनपरी मूल्य: चारजनाको परिवार, एक छाक तरकारी, दुई सय रुपैयाँ
दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न टाइम कार्डदेखि ऐनासम्म
बलिउड सुन्दरी नायिका दीपिका पादुकोणको नाक काटीदिने धम्की !
प्रचण्डलाई आइपर्यो यो कस्तो बज्रपात ! ४ वर्षमा हृदयघातले छोरा र क्यान्सरले छोरी गुमाए
पतिलाई हेर्न छोरा सहित अस्पताल गएकी पोखराकी प्रकाशकी अर्की श्रीमती अस्पतालमा नै लडेपछि बेहोश, उपचार सुरु